Qaramada Midoobay oo Ka Damqaday Xaaladda Mareykanka. – Shabakadda Amiirnuur
Qaramada Midoobay oo Ka Damqaday Xaaladda Mareykanka.
June 16, 2020 4:38 am by admin Views: 46
Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqay, Isniinta shalay, inuu qabanayo wadahadalo deg deg ah maalinta Arbacada oo berri ah, isagoo u kuur geli doona eedeymaha “midab kala sooca nidaamsan, naxariis darada booliiska iyo adeegsiga rabshadaha iyo kacdoonada Mareykanka.
Mareykanku xubin kama ahan 47-da gole, oo xaruntoodu tahay Geneva, kadib markii ay isaga baxday laba sano ka hor si ay Yahuuda ugu garab istaagto gumaadka Muslimiinta Filastiin iyo boobka dhulka Barakaysan.
Mareykanka ayaa lagu eedeeyay in nin caddaan Mareykan ah uu si xun u dilay nin kale oo Madow ah Mareykan ah taasina ay dhalisay mudaaharaadyo careysan oo ka socda guud ahaan dalkaas.
Hey’adaha Xuquuqul Insaanka sheegtay iyo Qaramada Midoobay ayaa aad uga walaacsan xaaladda kacdoon ee ka taagan Mareykanka iyo dilka ninkii madowga ahaa.
Mudada uu taagan yahay kacdoonka Mareykanka waxaa caalamaka islaamka ka dhacday xad gudubyo badan oo uu geystay Mareykanka waxaana la yaab leh inaaney ha hadlayn hey’adaha Xuquuqda Aadanaha iyo Qaramada Midoobay.
Si kastaba ha ahaatee kuwanka la iclaamiyay Arbacada Berito ah ayaan la ogeyn waxa uu soo kordhin karayo, xilli ay maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheyso carada dadka madowga ah.